कोभिडपछि नेपालको विकासका लागि लगानीका चार क्षेत्र, सुरज बैद्यको लेख
शनिबार, जेष्ठ १ २०७८ ११:३६ PM
अहिले भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरु रारा ताल, च्छोरोल्पा हिमताल, खप्तड, डोल्पा, पाथिभाराजस्ता चर्चित ठाउँमा पर्यटकहरु गएपनि उनीहरु बस्ने कहाँ भन्ने समस्या छ । हामीसँग ठाउँ छ तर, बस्ने ठाउँ नभएपछि कसरी त्यहाँसम्म जान सक्छन् त ? ती क्षेत्रहरुमा सुविधा सम्पन्न होटलहरु सञ्चालनका लागि सरकारले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अमेरिकामा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुमा सबैभन्दा बढी चाइनिज र इण्डियनहरु रहेका छन् । त्यहाँ जाने विद्यार्थीहरु नेपालमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अव हार्वर्ड, क्याम्ब्रीजलगायत विश्वका बेष्ट कलेजहरुलाई नेपालमा आउन दिनुपर्छ । उनीहरुलाई उनीहरुकै तरिकाबाट चल्न दिउँ, हामीलाई के नै फरक पर्छ र ? कमसेकम नेपालीका छोराछोरीहरु त यहीं पढ्न पाउँछन्, एउटा सुरुवात त हुन्छ ।
हैन भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । यस विषयमा सरकारले जति कुरा गरे पनि केही काम भएको छैन । यसको यथार्थ कहाँबाट देखिन्छ भने पछिल्लो समय सरकारले मात्र दुई वटा लगानी सम्मेलन भएको छ । लगानी सम्मेलन पछि नेपालमा लगानी गर्ने नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताहरुले के पाए ? नीतिगत रुपमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । अहिलेसम्म खाली राजनीतिक कुराकानीमै बढी व्यस्त भएको देखिन्छ ।
त्यसका लागि नेपालले सबैभन्दा पहिला एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ जोन (कृषि प्रशोधन केन्द्र ) स्थापनाका लागि सेज जस्तै नयाँ ठाउँ बनाउन आवश्यक छ । यदि सरकारले त्यस्तो ठाउँ उपलब्ध गराउन सकेमा निजी क्षेत्रले कृषि प्रशोधन केन्द्र खडा गर्छन्, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउँछन् । अहिले जग्गा किनेर कृषि प्रशोधन केन्द्र वा कृषिमा लगानी गर्छु भन्यो भने त्यो मुर्खता मात्र हुन्छ । किनकि अहिले जग्गाको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ ।
अहिले जे/जति उत्पादन भएका छन् ती सबै जोखिम मोलेर कृषकहरुले उत्पादन गरिरहेका छन् । सिजनल रुपमा उत्पादन हुने तरकारीहरु तत्कालै बिक्री हुन सकेन भने बिग्रन्छ र किसानको लगानी त्यतिकै खेर गइरहेको छ । नेपालमा कुनै व्यवस्थित प्रशोधन केन्द्र नभएकै कारण वर्षौदेखि किसानहरुले घाटा व्यहोर्दै आइरहेका छन् । एकातिर नेपालका किसानहरु घाटामा गइरहने र वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको तरकारी भारतबाट आइरहेको तितो यथार्थ छ । अब यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।
जबसम्म सिपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिन सक्दैनौं, हामीले विकासको फड्को मार्न सक्दैनौं । यही रोजगारी दिन सक्छौं भन्ने अवस्था नआएसम्म यहाँको विकास असम्भवजस्तै हो । अहिले धेरै हल्लाहरु सुनिन्छ कि नेपाल डिजिटल इकोनोमीमा अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिहरु नेपालमा छन त ? त्यसको क्षमता हामीसँग छ त ? यो विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ ।
कोभिडको कारण अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीहरुबाट आउने ४० विलियन डलर नोक्सान भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाजस्तो धनी मुलक नै विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाइरहेको छ भने नेपालले त्यसको अवसर किन नलिने ?
बैद्य नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।
सोमबार ५ श्रावण २०७७ १०:४८ AM मा प्रकाशित